မိုးထဲ လေထဲ လာခံစားသွားတယ်နော် မ :)
မ ဗျာ...မကြင်နာတတ်ဘူးးးးးးးး ဒီမှာ ချမ်းရတဲ့အထဲ
နှစ်သက်ရပါသော အိန်ဂျယ်စာစုများးးးးးးးးးး :)
i like it xo xo much !!!!!
အယ်အယ် အိန်ဂျယ်ဆီက ဖုန်းဝင်လာတယ်တဲ့။ မမတစ်ယောက်တော့ အရမ်းပျော်နေမှာပဲ။ မမကိုယ်တိုင်လှေလှော်နေရင် နည်းနည်းနောက်ကျနေမှာမို့ ဘလော်ဂါတွေပါ လှေကို ၀ိုင်းတွန်းပေးမယ်။ ဘယ်လိုလဲမမ။ သဘောတူရင် အီကြာကွေးပုပုကြော်ကျွေး။
ကဗျာ နုနုလေး ကြားထဲမှာ ကျွန်တော် ဖြေးညှင်းစွာ လွင့်မျော သွားခဲ့ . . . . . ကော်ဖီခွက်ကလေး ကိုင်ပြီ . . . လှပတဲ့ ရှုခင်းလေး တစ်ခုကို ငေးမေားနေရတဲ့ မနက်ခင်း တစ်ခုကို ရောက်သွား . . . မြက်ခင်းလွင်ပြင်ကြီးနဲ့ တောအုပ်အစပ်လေး တစ်ခုနားကို ရောက်သွား . .
လွင့်ပျံ တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေညှင်းလေးတွေထဲက တိမ်လေးတွေ ပြေးလွှား ဆော့ကစား နေတဲ့ မနက်ခင်းသစ် . . . .
အရာရာ . . . အရာရာဟာ ကဗျာထဲမှာ ကျွန်တော် နစ်မျှောနေခဲ့တဲ့ အချိန် . . .
နှစ်သက်စွာ ရင်ဖြင့် ခံစား စီးမျောခဲ့တယ် မမီး
အေးဖြော့ဖြာ့ နှုတ်ခမ်း သူ့အနမ်းနဲ့နွေးပါစေ။
www.kogyikaunghtet.blogspot.com ကဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်လို့ လင့်ခ်လည်း ချိတ်သွားပါတယ်နော်။ ကျွန်တော့်ဆီလည်း လာရောက် လည်ပတ်လှည့်ပါဦး။ Bye Bye
ချစ်စရာကဗျာကလေးတွေနဲ့လာမန့်တဲ့ မောင်လေး ဗညားနဲ့ ကိုမင်းဧရာတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ အိန်ဂျယ့်ကိုအားပေးတဲ့ စာဖတ်သူအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။